Zuva reWWDC 2016, nyowani 12 "MacBooks, nyowani beta OS X El Capitan uye nezvimwe zvakawanda. Rakanakisa revhiki paSoydeMac | ndinobva kuMac
Zuva reWWDC 2016, nyowani 12-MacBooks, beta nyowani yeOS X El Capitan uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
Jordi Gimenez | | apuro, Mac Os X, Mac makomputa
Vhiki rino rave riri rakanyanya kutyisa maererano nenhau dzine hukama nenyika yeApple uye kunyanya kune avo vedu vanofarira maMacs.Hongu, Apple pakupedzisira yakasarudza kuvhura yakavandudzwa 12-inch MacBook neveIntel processors nyowani, yavanopa iwe nekunatsiridza mukuzvimiririra uye mutsva wegoridhe rose rose. Unogona kuona zvese izvi muchinyorwa kuti isu takaparura maminetsi mushure mekuziva iyi gadziriso matiri takabatwa nekushamisika kune vese vezvenhau. Ehe, ichokwadi kuti runyerekupe pamusoro peichi chigadziriso rwakanga rwuri mune runyerekupe rwazvino, asi hapana akafunga kuti zvichakurumidza kudaro. Pamusoro pekuvandudzwa kweiyo yakatetepa uye yakapusa pombi kubva kuvakomana vanobva kuCupertino, svondo ranga rizere nenhau dzinonakidza dzatichapfupikisa mushure mekusvetuka.
Pakangoburitswa MacBooks nyowani, iyo kutanga kuita bvunzo havana kumirira. Mhedzisiro yakawanikwa mune idzi bhenji bvunzo, zvinotarisirwa maererano nekuvandudzwa kunoitwa mumushini uye zvakanyanya kutenda kune processor nyowani
Kune rimwe divi uye pamberi pekutanga uku tinofanirwa kuratidza mafirita maawa pamberi pe pamutemo nhau kubva kuWWDC gore rino 2016. Muchidimbu zvaive zvakadaro Siri anotarisira kuburitsa nhau nezve zuva reiyi WWDC 2016, asi ipapo iko kusimbiswa kwepamutemo kwakabva kuApple.
Mushure meiyi nhau inonakidza kwakauya nhau dzerufu rwakaziviswa. Manzana zvinoregedza zviri pamutemo rutsigiro rwe QuickTime yeWindows chikuva, nekudaro achizivisa nezvekutsakatika kwaive kwakamirira kwenguva yakareba kuti isvike.
Zuva rakatevera racho nhau nezve mabheji matsva eOS X, iOS uye watchOS yevagadziri yakaita gapano inoenderana pakati pezvakakurumbira. Kana zviri zvekuvandudzwa pachavo, hapana zvakawanda zvekuudza kunze kwekushoma kugadzirisa mukuita uye kudzikama kwemaitiro.
Pakupedzisira ini handidi kuti chero munhu ashaiwe kuona iyo basa rakaitwa neCURVED pamwe nevaverengi vako vekare veMac netekinoroji yazvino. Mukutaura aya Mac kana eMac, sekudanwa kwavanoitwa nevanoona nezvekuzvigadzira, havazoonekwa muzvitoro asi zvinonakidza kuvaona muvhidhiyo iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Zuva reWWDC 2016, nyowani 12-MacBooks, beta nyowani yeOS X El Capitan uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
MacBook Pros nyowani ichabudawo?
Microsoft inodonha yemahara OneDrive yekuchengetedza uye inoenzana neICloud